Negesi silicate amabhlogo kukhona empeleni esasisesisha, kodwa cishe ngokushesha baqashelwa njengenhlangano yokwakha kakhulu. Abakwazi usetshenziselwe ukwakhiwa kwezakhiwo ibhizinisi hhayi kuphela, kodwa futhi ekwakheni izindlu eziqinile. Sinenkosi umsindo kakhulu futhi zihlale zifudumele, okuhlala, abe mass encane. Zonke lezi igesi silicate amabhlogo (izinkomba lapho ukufakazela izinga yabo) edingekayo ukuze akhiqize ubuchwepheshe yayo.
Kwenza kubo lime, asebenza ngebhethri futhi aluminium powder. Umphumela kuyinto impahla esihle okuyinto Kulula ukushintsha, kodwa kakhulu amandla izici. Ikakhulukazi, ngenxa yalokhu, kusetshenziswa kakhulu, hhayi nje kuphela ukwakhiwa kwezindlu, kodwa nezalo nokuqinisa umthwalo esindayo izindonga.
Lokhu ixhunyiwe ezinezici lobuchwepheshe, futhi nge izindleko ezikhangayo. Kusukela iphuzu kwemvelo umbono, ukusuka kulezi zakhiwo futhi enhle ngoba zihlanganisa kungekho nolaka chemical compounds, okungase ukuxubana imvelo. Ukuze uncamela ukwakhiwa kwezindlu eyenziwe amabhlogo silicate, kumelwe okungenani cishe ukucabanga ubuchwepheshe ukwakhiwa yabo.
Ngenxa kwabantu bayo, bona cishe awekho ngaphansi ukuncipha namandla okusezingeni eliphezulu babe ngenxa yesizathu esifanayo. Iqiniso lokuthi, ngemva udini, ezibekwe i autoclave yomiswa ezingeni lokushisa cishe abangamakhulu amabili degrees, futhi ingcindezi 14 ibha. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, material ithatha wonke umswakama ngokweqile hhayi kuphela, it is nombala basakaza izithasiselo zobuchwepheshe. Lokhu kuyinto ebalulekile ukuthi senqubo yokukhiqiza esetshenziswa lime esikhundleni ukhonkolo. Kungenxa igesi silicate wakhe amabhlogo (izinkomba amakhasimende wanelisekile uqinisekise lesi) akubizi.
Ngokuvamile, le nto utfolakala kuluhlobo ngokhonkolo yeselula, lethiwa ezimbotsheni amancane ukuthi musa idlule 4 mm ububanzi kanye ngokulinganayo basakaza kulo lonke ivolumu. Ngenxa lezi amaphrojekthi eside kwezindlu kusukela amabhlogo we silicate ingasetshenziswa ngisho sikhula kahle ezindaweni ezibandayo e, kusukela emoyeni equkethwe kuwo, kuyinto enhle kakhulu yisivikelo ezishisayo. Unika umsindo kakhulu nangokuvikela izakhiwo emabhuloki. Qedela homogeneity ukungaguquguquki esifanayo inikeza amandla eziphakeme imikhiqizo siphelile.
Ngaphezu kwalokho, igesi silicate amabhlogo (izibuyekezo - ubufakazi engcono) livame ukusetshenziswa zifudumele of mbumbulu kwezindlu. Ugange Ingaphakathi lazo ukwenza lushibhe kakhulu ukwedlula ukusetshenziswa kulolu isitini njongo. Ngenxa kalula ngayo indaba Ubukhulu bayo elincane umsebenzi zingancishiswa kakhulu.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukustaka kufanele iqhutshwe hhayi slurry usimende, futhi ikakhulukazi ukwakheka ingcina. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka ukwakhiwa cishe Seamless okuyinto eveza umahluko phakathi igesi silicate amabhlogo. Izibuyekezo bathi ngenxa kukhona nhlobo amabhuloho ezishisayo, ngenxa okuyinto abanikazi izindlu ezinjalo kungase kusindise ku bafudumale. Kafushane, izinzuzo banayo ngokwanele.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa isisindo sayo aphansi, ungawakhi nengcindezi enkulu esisekelweni. Sikhishwe soundproofing oncomekayo, ungakwazi ukwakha ngisho indlu eduze umgwaqo omatasa.
Likuphi Vancouver Island? Incazelo, endaweni, isithombe
Ukulungisa izimoto French e-Kaliningrad